Accueil > Gazetin'ny nosy > Inty sy nday : Nohitsakitsahin-jo ny malagasy
Nitohy omaly zoma tontolo andro ny fifanatrehan’ny solombavambahoaka tamin’ireo mpikambana mandrafitra ny governemantan’i Ntsay Christian, izay nanomboka ny alakamisy teo, teny Ivato. Omaly no nitondra ny valin-teny nateraky ny fanontanian’ny depiote sy ny fangataham-panazavan’izy ireo ny minisitra isanisany, ka isan’ny nandray fitenenana voalohandohany ny minisitry ny raharaham-bahiny, Patrick Rajoelina.
Dia hagagana toy ny mahita “vazaha misalaka” no nandre ny minisitry ny raharaham-bahiny Malagasy niteny. Asa na noheveriny ho eny anoloan’ny fivorian’ny Minisitry ny raharaham-bahiny ao amin’ny Vondron-tany miteny frantsay na “Frankôfôna” izy fa hatramin’ny voalohany ka hatramin’ny farany tamin’ny fandraisam-pitenenany, dia teny frantsay 100% no nampiasainy.
Fanitsakitsahana ny zon’ny vahoaka Malagasy izany, hoy ny maro satria ny solombavambahoaka dia solontenan’ny vahoaka Malagasy ary ambonin’izany, mba tsy haha-tompon-trano mihono ny vahoaka Malagasy dia nampitaina mivantana tamin’ny haino aman-jerim-panjakana izany fifanatrehana izany.
Marina fa voafaritry ny lalampanorenana ny hoe “ny teny Malagasy sy ny teny frantsay no tenim-pirenena eto Madagasikara” saingy amin’ny fifampiresahana amin’ny vahoaka mivantana dia takian’ny hasin’ny vahoaka sy ny firenena Malagasy ny itenenana teny Malagasy eto Madagasikara.
Na ny ampahany tamin’ireo depioten’i Madagasikara aza dia azo antoka fa misy tsy mahafehy ny teny vahiny nefa dia ny fampiasan’ny minisitra Patrick Rajoelina ny teny frantsay dia tena mitory tsy firaharahiana ny vahoaka Malagasy sy ny olom-boafidiny toa ny solombavambahoaka.
Soa fa ny Minisitry ny fitsarana sady mpitahiry ny fitombo-kasem-panjakana, Imbiky Herilaza, no nandray fitenenana taorian’ny minisitra Patrick Rajoelina ka nampiakatra ny hasin’ny teny Malagasy izy. Ankoatry ny fitenenan’Imbiky Herilaza ny teny Malagasy dia notsindriany fa “efa mandefa toro-marika ho an’ny mpitsara mpamoaka didy ny ministeran’ny fitsarana mba hatao amin’ny teny Malagasy ny didim-pitsarana avoaka, ary mbola asiana fanampim-panazavana amin’ny teny Malagasy koa izany satria misy ny tsy mbola mahay mamaky teny”.
Raha hitodika ny tranga nisy teto isika dia ny Praiminisitr’i Hery Rajaonarimampianina, Kolo Roger, no isan’ny mpitondra tsy nahay niteny Malagasy koa teto, saingy niezaka izy ary nanao teny “vary amin’akotry” (sady frantsay no Malagasy), iozay tsy nahafa-tsiny azy akory.
Azo ambara ho fahafaham-baraka ho an’ny fitondram-panjakana mihitsy ny fahitana minisitra Malagasy, voalaza fa Malagasy ray sy reny, nefa tsy mahay miteny Malagasy, ary tsy afaka miteny afa-tsy teny frantsay eo anoloan’ny vahoaka Malagasy.
Tokony hieritreritra ny amin’ity “Minisitra Vahiny” ity ihany ny filohampirenena sy ny praiminisitra satria izahay teto amin’ity gazety ity dia efa nanipika fa “tsy mahay miteny Malagasy izy io”, raha vao voatendry. Sa izay mihitsy no nanendrena azy ho minisitra ? Dia tsy misy malagasy hafa mahafehy ny ministeran’ny raharaham-bahiny nefa mahay miteny malagasy ve eto ?